बिहे गर्न केटा खोज्दै ज्योति मगर।चाहन्छिन् यस्तो केटा।कोही इच्छुक हुनुहुन्छ? |
बिहे गर्न केटा खोज्दै ज्योति मगर।चाहन्छिन् यस्तो केटा।कोही इच्छुक हुनुहुन्छ?
October 29, 2021 adminLeaveaComment on बिहे गर्न केटा खोज्दै ज्योति मगर।चाहन्छिन् यस्तो केटा।कोही इच्छुक हुनुहुन्छ?
काठमाडौं । चर्चित लोक तथा दोहोरी गायिका तथा मोडल ज्योति मगरले काठमाडौंमा भव्य घर बनाएकी छिन् । कलाकारिता बाटै उनले काठमाडौंमा घर बनाएको कुरा पहिले नै बताएकी थिइन् ।कोरोना महामारी शुरु भन्दा पहिले नै बनाइसकेको घरमा हाल उनी बस्दै आएकी छिन् । विकट गाउँ रोल्पामा जन्मेर काठमाडौंमा संघर्ष गर्दै आफूले घर बनाएको कुरामा उनी गौरव गर्छिन् । काठमाडौंको कोटेश्वरमा उनले तीन तलाको भव्य विशाल घर बनाएकी छन् ।
ह्वात्तै बढ्यो छड र सिमेन्टको मूल्य,किन्नै नसकिने भयो!कति?
अस्पतालमा बच्चा जन्माउने क्रममा बच्चाको टाउको डाक्टरको हा’तमा,शरीर ग’र्भमै छु’ट्यो!भिडियो हेर्नुहोस
डेरावाल दिदीको मनमोहक शब्द:कहिलेकाहीँ त्यता साँघुरो भए सुत्न मेरोतिर आए पनि हुन्छ नि भाइ ।मन थामेर पढ्नुहोला